Ho an'ny santionany, ny fotoana fitarihana dia eo amin'ny 7 andro. Ho an'ny famokarana faobe, 20-30 andro aorian'ny nahazoan'ny fandoavana ny vola. Manjary mandaitra ny vanim-potoana ireo rehefa 1) nahazo ny famandrihana nataonao ianao, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao ianao. Raha toa ka tsy mandeha amin'ny fe-potoana voatondro ireo loham-pianaranay dia midira fotsiny ny zavatra takinao amin'ny varotrao. Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome ny zavatra ilainao izahay. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia afaka manao izany isika.
Manome antoka ny fitaovana sy ny asa izahay. Ny fanoloran-tena ho anay dia ny fahafaham-po amin'ny vokatra. Amin'ny garantiana na tsia, dia ny kolontsainan'ny orinasa iarahantsika sy mamaha ny olana rehetra an'ny mpanjifa amin'ny fahafaham-pon'ny tsirairay